महतोलाई किचेर मार्ने क्रसर डनलाई चार करोडको ठेक्का, मूख्य अपराधी जोगाउन चलखेल – खोज केन्द्र
» अर्थ » खोज रिपोर्ट » प्रदेश » समाचार » समाज अंक: 912
महतोलाई किचेर मार्ने क्रसर डनलाई चार करोडको ठेक्का, मूख्य अपराधी जोगाउन चलखेल
खोज केन्द्र सोमबार, पौष २८, २०७६ मा प्रकाशित
मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका २४ वर्षीया दीलिपकुमार महतोलाई किचेर मार्ने काममा संलग्न क्रसर उद्योगलाई स्थानीय सरकारले चार करोडको ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
धनुषा प्रहरीका अनुसार महतोलाई २५ पुस बिहान चार बजे चुरियामाई गिट्टी बालुवा प्रशोसन उद्योगको संलग्नतामा टिपर प्रयोग गरेर औरही खोलामा किचेर हत्या गरेको थियो । चुरियामाई प्रशोधन उद्योग औरही खोलाबाट करीब दुई सय मिटर दक्षिणमा पर्छ ।
२६ पुसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत महतोको दाहिने कोखमा लिभर प्रहार गरेर घाइते बनाए पछि टिपरले किचेर हत्या गरेको बताएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका अनुसार, सोही दिन विहान मर्निङवाकमा निस्केका महतोलाई करीब चार बजे ना ७ ख ६४१३ नम्बरको टिपरले किचेर हत्या गरेको थियो । दीलिपले उनको घर नजिकैको औरही खोलामा अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको विरोध गदै आएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले युवकलाई किचेर मार्ने काममा संलग्न भएको अभियोगमा चुरिया माई क्रसर उद्योगका सञ्चालक बिपिन महतोलाई २६ मंसीरमा पक्राउ गरिसकेको छ । बिपिन महतो नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
धनुषा प्रहरीका अनुसार महतो नै युवकलाई किचेर मार्ने रात औरही खोलामा रहेको र उनकै संलग्नतामा हत्या भएकाले पक्राउ गरिएको हो ।
२४ बर्षीया युवकको हत्या भएको ठाउँ औरही खोला मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ । मिथिला नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि औरहीसहित जलाठ, रातु, जगधर, बसही र बडहरी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको प्राकृतिक स्रोत साधन निकाल्न जय बजरङ्ग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई ठेक्का लगाएको छ ।
नगरपालिकाले चालु आवका लागि जय बजरङ्गसँग ८ कात्तिक २०७६ मा चार करोड ५१ लाख ५१ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । जय बजरङ्ग बालुवा प्रशोधन उद्योग मिथिला नगरपालिका–९ को बडरी र लालगढको बीच भागमा सञ्चालित छ ।
ठेक्का पाए बापत जय बजरङ्गले यो आर्थिक वर्षको अन्त सम्ममा मिथिला नगरपालिकालाई चार करोड ५१ लाख ५१ हजार रकम बुझाउनु पर्छ । जय बजरङ्गले यो रकम औरही सहितका ६ वटा खोलाबाट निकालेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बिक्रि गरेर तिर्नुपर्छ । तर, जय बजरङ्गले गिट्टी, बालुवा संकलनको काम आफु एक्लै गर्दैन ।
जय बजरङ्गका सञ्चालक बेचन शर्माले गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने ठेक्काको काम चुरियामाई क्रसर उद्योगसहित तीन वटा क्रसर उद्योग मिलेर गरिरहेको बताए ।
यसरी चुरियामाईले नगरपालिकाको अनुमति बिना औरही खोलाबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरेको पाइएको छ । जय बजरंगले नगरपालिसँग गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार औरही खोलाबाट प्रति क्यूफिट रु. ३.७५ का दरले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको छ ।
तर, औरही खोलाबाट मापदण्ड बिपरित ठुला पर्ने खाल्डा पार्ने जय बजरंग र चुरियामाई क्रसर उद्योगले रातको समयमा उत्खनन्को काम गर्दै आइरहेका थिए । यस्तो अवैध उत्खनन्को विरोध गर्दै आएका युवक मतहतोलाई क्रसर संञ्चाकको संलग्नतामा हत्या गरियो ।
मापदण्ड विपरित औरही लगायतका खोलाबाट भइरहेको अवैध उत्खनन्बारे किन मिथिला नगरपालिकाले अनुगमन गरेर कारकाबी गर्न सकेन ?
नगरपालिकाका उप–प्रमुख ताराकुमारी बस्नेत मापदण्ड बिपरित रातको समयमा उत्खनन् गर्न नपाइने नियम भए पनि आफुहरुले अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछिन् । बस्नेत जनप्रतिनिधिले ज्यानको माया मारेर रातको समयमा अनुगमनमा जान नसक्ने बताउँछिन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख हरि नारायण महतो रातभर खोलामा गएर अनुगमन गर्न नसक्ने बताउँछन् । महतो चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भए पनि कुनै पनि क्रसरलाई खोलाबाट बालुवा, गिट्टी निकाल्न अनुमति नै नदिएको बताउँछन् ।
उनी यस वर्ष कुनै पनि क्रसरलाई ठेक्का नदिने पक्षमा भए पनि जिल्ला समन्वय समितिले परिपत्र गरेर ठेक्का लगाउन दबाब बताउँछन् । उनी खोला क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने दायित्व पनि समितिकै भएको बताउँछन् ।
युवक मारिएको घटनामा अनुमति बिना चुरियामाई सहित जय बजरङग्ले उत्खनन् गरेको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनी भन्छन्, “अब ठेक्का रद्द वा नगर्ने भन्ने विषयमा म एक्लैले केही गर्न सक्दिन । यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिकाको बोर्डलाई छ ।”
नगरप्रमुख महतोले क्रसर उद्योगलाई जथाभावी उत्खनन् गर्न दिने काममा मिथिला–५ का वडाअध्यक्ष संलग्न भएको आरोप समेत लगाए । घटना भएको स्थल औरही खोला पनि मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत वडा–५ मा पर्छ । वडा–५ का अध्यक्ष हुन्, नेपाली कांग्रेसका श्यामबाबु यादव ।
मिथिला–५ का वडा अध्यक्ष यादव चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बालुवा प्रसोधन गर्न दिनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालमा सिफारिस गरेको खुलाए ।
तर, यादवले पनि मिथिला नगरपालिकाको कुनै पनि खोलाबाट कसैलाई बालुवा निकाल्न अनुमति नदिएको बताए । उनले चुरियामाई पत्र नै लेखेर बालुवा प्रशोधनका लागि अनुमति दिनुको कारणबारे प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनले पक्राउ परेका चुरियामाईका सञ्चालक विपिन महतो कांग्रेस पार्टी छाडेर अरु नै पार्टीमा गइसकेकाे बताए ।